WINE 6.17 inovandudza DPI rutsigiro zvakare uye inounza 375 shanduko | Linux Vakapindwa muropa
WINE 6.17 inovandudza DPI rutsigiro zvakare uye inounza ingangoita mazana mana shanduko
WineHQ yakateerazve karenda yayo nenguva uye, mushure meiyo yapfuura v6.16nhasi akakanda WAINI 6.17. Iyo itsva Staging vhezheni, chitauro chinogadziridzwa neshanduro mavari vanowedzera maficha matsva vhiki mbiri dzoga dzoga, asi zvinhu hazvina kukwenenzverwa zvekuti chita chakatsiga. Sezvinenge nguva zhinji muchikamu ichi chebudiriro, timu yeprojekti yatora mukana wekuunza shanduko zhinji.
MuWINE 6.17 gumi nembiri dzakagadziriswa, asi dzakagadzira 375 shanduko muhuwandu. Pakati pavo, svondo rino ivo zvakare vakaratidza chimwe chinhu chine hukama neDPI pamwe nemamwe mana mapoinzi, yekupedzisira iri yakajairwa kukanganisa kururamisa. Iyo rondedzero yenhau dzavakafunga dzakakosha zvakakwana kuti zviparadzanise kubva kune zvimwe zviri zvinotevera.
WINE 6.17 inosimbisa
WainiCfg chirongwa chakashandurwa kuita PE.
Zvirinani yakakwira DPI rutsigiro mune zvakadzamidzirwa mafomu.
Yakagadziriswa debugger rutsigiro muWow64 modhi.
WINE 6.17, yatinofanira kurangarira zvakare kuti iiyo Stage kana yekuvandudza vhezheni uye haina kugadzikana, ikozvino inogona kutorwa kubva izvi madokero kumwe kubatana. Iyo purojekiti inopawo ruzivo kurodha pasi izvi uye neramangwana zvigadziriso nekuwedzera iyo yepamutemo repositi yeLinux pano, asi inogona zvakare kuiswa pane macOS uye Android. Kana dura rikawedzerwa, unogona kusarudza pakati peshanduro, Stage kana Dev shanduro.
Panguva ino mukusimudzira, isu tave kutosvika panguva iyo Vanoburitswa Vanokwikwidza vachatanga kusvika, asi kazhinji vhezheni inotevera ichave WINE 6.18 uye kuti ichaburitswa pa inotevera Gunyana 24. MuWINE 5.x, makumi maviri neshanu maShanduro akaburitswa, panguva iyi vakatoburitsa Vanoburitswa Vanodaidzwa pasvondo. Kana iyo nyowani Stage vhezheni ikasimbiswa, ivo vanozo-regedza zvakare mazana emazana tweaks.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WINE 6.17 inovandudza DPI rutsigiro zvakare uye inounza ingangoita mazana mana shanduko
Microsoft v. SVR. Nei yakavhurwa sosi inofanirwa kuve yakajairwa